महि’नावारी भएको कति दिनमा यौ’नसम्पर्क गर्दा गर्भ रहन्छ ?
विभिन्न सामाजिक परिवर्तनसँगै यौ’नसम्बन्धी विचारमा पनि केही खुलापन आएको छ, तर पनि विवाहपूर्व यौ’नसम्पर्क अझै पनि एक किसिमले वर्जित नै छ । विवाहपूर्व यौ’नसम्पर्कका आ–आफ्नै स’मस्या हुन सक्छन् ।
के महिनावारी हुँदा यौ’नसम्पर्क गर्न हुन्छ ?
कतिपय समाजमा म’हिनावारीका बेला यौ’नसम्पर्क गर्नु हुँदैन भन्ने धारणा छ । म’हिनावारी भएको बेलामा स्वस्थ पुरुष तथा महिलाको बीचमा हुने यौ’नसम्पर्कलाई वर्जित गर्नुपर्ने कुनै वैज्ञानिक कारण छैन ।
महि’नावारीको रगतको स्रोत पाठेघर हो र पाठेघरको मुखमा भएको सानो प्वालबाट यो रगत बाहिर आउँछ। पाठेघरको मुखले हत्तपत्त बाहिर आइसकेको कुरालाई यहाँसम्म कि कतिपय सूक्ष्मजीवलाई पनि भित्र जान दिँदैन। यौ’नसम्पर्क गर्दा यो’निरसको सम्पर्कमा लि’ङ्ग आउछ । त्यसैगरी थोरै भए पनि लिङ्ग’बाट आउने रसको सम्पर्कमा यो’नि पनि आउँछ। स्वस्थ व्यक्तिको बीचमा भएको यौ’नसम्प’र्कमाआउने यस किसिमको रसले हा’नि गर्दैन त्यसैले यसको कारणले डराउनु पर्दैन ।
महि’नावारी भएको कति दिनमा से’क्स गर्दा गर्भ रहन्छ ?
महि’नावारी भएको कति दिनमा से’क्स गर्दा सुरक्षित दिन कुन कुन हो एकीन गर्न गाह्रो विषयको रहेको छ । महिलाहरुको नियमित महि’नावारी हुने र नहुनेमा यसले फरक अर्थ राख्छ ।
– डिम्ब निष्कासन
– वी’र्य स्ख’लन
– डि’म्ब निषेचन तथा
महिलाको डिम्ब महिनाको एकपटक मात्र निष्कासन हुन्छ । डिम्ब निष्कासन हुने समय नजिक गर्भ रहने सम्भावना बढी हुन्छ । शुक्र’कीटसँग मिलन हुन डिम्ब निस्किएको हुनु आवश्यक छ ।
सामान्यतः महि’नावारीको नवौं दिनमा यौ’नसम्पर्क गर्दा गर्भ रहने सम्भावना न्यून हुन्छ । म’हिनावारी ठीक २८ दिनमा नभएर ढिलो चाँडो हुनेमा यो विधि प्रभावकारी मानिन्न । सुरक्षित काललाई नै गर्भनिरोधका रुपमा प्रयोग गर्ने हो भने कम्तीमा पनि ६ महिनासम्मका महि’नावारीका दिनहरू लिनुपर्छ ।
सबैभन्दा छोटो महि’नावारीबाट १८ दिन घटाउँदा गर्भवती हुन सक्ने पहिलो दिन पत्ता लाग्छ भने सबैभन्दा लामो दिनबाट ११ दिन घटाउँदा गर्भवती हुन सक्ने अन्तिम दिन पत्ता लाग्छ । उदाहरणका लागि यदि कुनै महिलाको महिनावारी चाँडोमा २४ दिनको र ढिलोमा ३१ दिनको हुने रहेछ भने, २४, १८, ६ हुन्छ, अर्थात् छैटौं दिनदेखि स’म्भोग गर्दा ग’र्भ रहन सक्छ । ३१, ११, २० हुन्छ, अर्थात् २० औं दिनभन्दा पछि यौ’नसम्पर्क गर्दा गर्भ रहन सक्छ ।महिला स्वास्थ्य
दाँत पहेँलो भएर चिन्तित हुनुहुन्छ ? चम्काउन अपनाउनुस् यस्तो उपाय
आल्मुनियम, स्टिल, पित्तल वा माटो कस्तो भाडाँमा खाना पकाउँदा स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ ? जानीराखौं
खुशीको खबर! नेपाललाई थप २० लाख डोज खोप दिने चीनको घोषणा
यसरी रोक्न सकिन्छ, सुत्दा मुखबाट र्याल निस्किने समस्या
बदलिँदो मौसममा पिनासको जोखिम, पिनास हुँदा के खाने,के नखाने ?